Bible n'ime otu afọ - Igbo Bible 1988 - Septemba 26
1. Achọrọ m ka unu cheta na ọ bụrụ na nna nwe ụlọ anwụọ hapụrụ nwa ya dị ntakịrị akụ ya nile, o nweghị ihe dị iche nꞌetiti nwa ahụ na ohu nọ nꞌụlọ ahụ, nꞌihi na nwantakịrị ahụ enweghị ike ilezi akụ ahụ anya. Ọ bụ ezie na akụ ahụ nile bụ nke ya, ma o nweghị ihe ọ pụrụ iji ya mee, tutuu o too, bụrụ dimkpa.
2. Mgbe ọ ka bụ nwantakịrị, ọ ga-eme ihe ndị ahụ e tinyere akụ nna ya nꞌaka kwuru, tutuu ruo mgbe o toruru ọnụ ọgụgụ afọ ahụ nna ya kwuru.
3. Otu a ka ọnọdụ anyị dị tutuu ruo mgbe Kraịst bịara. Anyị nọ dị ka ohu nꞌokpuru iwu ndị Juu, na omenala ha nile, nꞌihi na anyị nwere olileanya na ha ga-azọpụta anyị.
4. Ma mgbe oge a kara aka ruru, oge ahụ Chineke kpebiri, o zitere Ọkpara ya, ka nwanyị mụọ ya dị ka onye Juu.
5. Chineke zitere ya ka ọ gbapụta anyị, ndị nọ nꞌokpuru iwu, ime anyị ndị a ga-agụ dị ka ụmụ Chineke nꞌezie.
6. Ebe ọ bụ na anyị bụ ụmụ ya, Chineke zitere Mmụọ Nsọ ya, ka ọ bịa biri nꞌobi anyị, inyere anyị aka, ikpere Chineke Nna anyị ekpere nꞌụzọ ziri ezi.
7. Ugbu a, anyị abụkwaghị ndị ohu, kama anyị bụ ụmụ Chineke. Ebe ọ bụkwa na anyị bụ ụmụ ya, Chineke ga-enye anyị ihe nile o kwere na nkwa inye ụmụ ya.
8. Tupu unu bụ ndị mba ọzọ amata Chineke, unu bụ ohu nye chi nile mmadụ jiri aka mee, chi nke na-abụghị chi dị ndụ.
9. Ma ugbu a unu amatala Chineke, ka m ga-asị na ọ bụ Chineke chọpụtara unu. Ùnu si aṅaa na-achọkwa ịlaghachi azụ ịghọ ndị ohu nye okpukpe na-enweghị isi, okpukpe nke ike afụ na-adịghị nꞌime ya, okpukpe nke ịchọ ịbụ ndị a na-azọpụta site nꞌidebe iwu?
10. Lee ka unu si agbalị ịchọ ihuọma Chineke, site nꞌidebe ụbọchị ụfọdụ, na ọnwa ụfọdụ, na oge ụfọdụ, na afọ ụfọdụ iche.
11. Unu na-emenye m egwu! Ọ̀ pụtara na ọrụ nile m rụrụ nꞌetiti unu abụrụla ihe efu?
12. Ezi ụmụnna m, arịọọ m unu, na-agbasonụ ụzọ m, bụrụnụ ndị nwe onwe ha dị ka m si bụrụ onye nwe onwe m, site nꞌiwu. O nweghị ihe ọjọọ ọ bụla unu mere m.
13. Mgbe m buru ụzọ bịa nꞌetiti unu, kwusaara unu ozi ọma ahụ, unu maara na ọ bụ nꞌime adịghị ike nke anụ ahụ ka m ji kwusaara unu ozi ọma.
14. Ma ọ bụ ezie na m nọ nꞌọrịa nꞌoge ahụ, unu eledaghị m anya, ma ọ bụ jụ ige m ntị, nꞌihi ahụ ọjọọ m nke gaara abụrụ unu ihe ọnwụnwa iji jụ m. Kama unu nabatara m, dị ka a ga-asị na m bụ mmụọ ozi Chineke zitere, ma ọ bụ dị ka a ga-asị na m bụ Jisọs Kraịst nꞌonwe ya.
15. Èbee ka mmụọ nke obi ụtọ ahụ unu nwere dị, nke anyị nile ji nọkọọ nꞌoge ahụ? Nꞌihi na unu maara nꞌoge ahụ, na a sị na ọ bụ ihe a pụrụ ime, unu gaara aghụpụta anya unu, tinye ya nꞌọnọdụ anya nke m, iji nyere m aka.
16. Ugbu a, àghọọla m onye iro unu, nꞌihi na m na-agwa unu eziokwu?
17. Ndị ozizi ụgha ahụ ihe banyere unu na-anụ ọkụ nꞌobi achọghị ịdọtara unu onwe ha nꞌihi ọdịmma unu. Kama ihe ha na-achọ ime bụ ka nkewa dị nꞌetiti mụ na unu, ka unu si otu a hapụ ige m ntị.
18. Ọ bụkwanụ ihe dị mma, ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ejiri obi na-anụ ọkụ na obi zuru oke na-achọ ọdịmma unu, nke ka nke, ọ bụrụ na ha adịghị eme ya nanị mgbe m nọ nꞌetiti unu.
19. Ezi ụmụ m, lee ka omume unu si ewute mmụọ m. Lee ka m si nọdụkwa nꞌọnọdụ ihe mgbu, na-eche ụbọchị ahụ a ga-eme ka unu zuo oke nꞌime Kraịst, dị ka nwanyị nọ nꞌihe mgbu si eche ọmụmụ nwa ọhụrụ ya.
20. Ọ gaara adị m mma ma a sị na m nọ nꞌetiti unu ugbu a, nwee ike ịmata otu m ga-esi gbanwee olu okwu m, nꞌihi na amaghị m ihe m kwesịrị ime nꞌihi ọnọdụ unu.
21. Ugbu a geenụ m ntị, unu ndị na-eche na ọ dị mkpa idebe iwu ndị Juu tupu a zọpụta unu. Gịnị mere unu ebughị ụzọ chọpụta ihe iwu ndị ahụ pụtara?
22. Nꞌihi na e deela ya nꞌakwụkwọ nsọ sị na Eberaham mụtara ụmụ nwoke abụọ. Otu nꞌime ha bụ nwa nke ohu ya nwanyị mụrụ, nke ọzọ bụ nke nwụnye ya na-abụghị ohu mụtara.
23. A mụrụ nwa ahụ ohu nwanyị ahụ mụrụ dị ka e si amụ ụmụaka ndị ọzọ. Ma nwa ahụ nwunye ya na-abụghị ohu mụtara bụ nke a mụrụ nanị mgbe Chineke kwere Eberaham nkwa na-aga amụ ya.
24. Ugbu a, akụkọ otu e si mụọ ụmụ abụọ a bụ ihe na-egosi anyị ụzọ abụọ pụtara ìhè Chineke si enyere mmadụ aka. Otu ụzọ bụ ụzọ inye ha iwu ya ka ha debe. O nyere ha iwu a nꞌugwu Sainai mgbe o nyere Mosisi iwu iri ahụ. Aha ọzọ ndị Araab na-akpọ ugwu Sainai bụ Ugwu Hega. Hega bụ ohu nwanyị ahụ Eberaham lụrụ. Ọ nọchiri anya obodo Jerusalem nke bụ obodo ndị Juu, ebe isi oche okpukpe ime ihe na-atọ Chineke ụtọ site nꞌidebe iwu dị. Ndị Juu ahụ na-agbalịkwa iso ụzọ a bụ ụmụ Hega, bụrụkwa ndị ohu dị ka ya.
26. Ma obodo anyị, ebe isi oche okpukpe anyị dị bụ Jerusalem dị nꞌeluigwe. Ọ bụ obodo na-anọghị nꞌohu nye iwu ndị Juu.
27. Ọ bụ nke a mere Aịzaya jiri buo amụma sị, “Ṅụrịa ọṅụ ugbu a, gị nwanyị ahụ na-amụtaghị nwa. Tie mkpu ọṅụ gị onye na-enweghị ike mụta nwa ọ bụla. Nꞌihi na aga m enye gị ọtụtụ ụmụ, ụmụ gị ga-akarị ụmụ nke nwanyị ohu ahụ nwere.”
28. Ma anyị onwe anyị ụmụnna m bụ ụmụ ahụ Chineke kwere nkwa ya. Anyị dị ka Aịzik.
29. Nꞌihi nke a, anyị ndị e sitere na Mmụọ Nsọ mụọ ka ndị chọrọ ka anyị soro ha na-edebe iwu na-emegbu, na-esogbukwa, dị ka Ishmel nwa Hega, nwanyị ohu, si megbuo, ma sogbuokwa Aịzik.
30. Ma akwụkwọ nsọ gwara anyị na Chineke nyere Eberaham iwu sị ya chụpụ Hega, nwanyị ohu ahụ na nwa ya, nꞌihi na nwa nwanyị ohu enweghị ike isoro nwa nwanyị na-abụghị ohu keta oke nꞌakụ na ụba Eberaham.
31. Ụmụnna m, anyị abụghị ụmụ nwanyị ohu mụtara, ndị a mụrụ ka ha na-edebe iwu ndị Juu, kama anyị bụ ụmụ nwanyị nwere onwe ya, nne nwe ụlọ, ndị Chineke na-anabata nꞌihi okwukwe anyị nwere nꞌime ya.